Iyo itsva vhezheni yeChannel 70 inosvika neshanduko nyowani | Linux Vakapindwa muropa
Maawa mashoma apfuura iyo itsva vhezheni yeChannel 70 webhu bhurawuza yakavhurwa. Panguva imwecheteyo, yakagadzikana vhezheni yeiyo Chromium chirongwa inowanikwa.
Chromium ndiyo yakavhurwa sosi yewebhu browser kubva kune iyo Google Chrome inowana kodhi yayo yekodhi. Bhurawuza anogovera yakawanda yekodhi uye maficha, zvakadaro pane mimwe misiyano midiki muzvimiro uye vane marezinesi akasiyana.
1 Main nyowani maficha muChannel 70
2 Shanduko nyowani
3 Maitiro ekuwana Google Chrome 70?
Main nyowani maficha muChannel 70
Mukati akakosha maficha atinogona kuwana mune iyi nyowani vhezheni yeGoogle Chrome 70 Tinogona kuona kuti mushandisi ane mukana wekusarudzira plugins chete kune mamwe masayiti.
Nenzira iyi futi Unogona kushandisa kurambidzwa pakushandiswa kwemapulagi emasaiti asina kuiswa mune whitelist.
Iyo yega yekumisikidza maitiro eiyo plugin inowanikwawo pane yega yega peji, umo iyo yekuwedzera inogoneswa chete mushure mekujekesa kudzvanya pane iyo icon mune iyo pani.
Aya maficha anogona kushandiswa kuchengetedza kubva kune yakavanzwa komisheni yezvisiri-zvakasarudzika zviito zvekuwedzera, senge hove yeruzivo rwega kubva papeji kana kushambadzira kushambadzira.
Pamusoro pazvo akawedzera kugona kurodha zvakare akawanda matab panguva imwe chete: iwe unogona ikozvino sarudza boka revatepi uye tinya "Ctrl + R" kana iyo "Reload" bhatani mune mamiriro menyu;
Tinogona kuona kuti iyi vhezheni itsva yeChannel 70 akawedzera yekuyedza modhi kuti akurumidze kushandura kuvhura yekurumbidza runyorwa tebhu mune kero bar yepeji ratovhurwa mune imwe tebhu, bhatani rinoratidzwa kuti kurumidze kusvetukira kune ino tebhu.
Iyo nhanho-nhanhatu maitiro ekuchinja chinongedzo chekuchengetedza chiratidzo chakakwana: iyo yekuvharira icon yeHTTPS yabviswa uye iyo "Isina kuchengetedzeka" meseji ruvara rweHTTP yekubatanidza yakashandurwa kubva grey kuenda kutsvuku.
Yakawedzera "Faira" chinongedzo kukero bar kuratidza kwekuwana kune zviwanikwa zvemuno. Shanduko yakambotaurwa, iyo inobvisa kuratidzwa kwe "file: //" schema mubara rekero, yakarambwa.
Uyewo, chiratidzo chekupinza chakachinjwa, izvo izvo zvino zvinokutendera iwe kuti unzwisise ipapo kana mushandisi ari online kana kwete uye kana data data ichigoneswa muzvirongwa.
Otomatiki kubuda kubva kuzere screen mode inopihwa kuitira kuratidza dialog mabhokisi, akakosha ekuvimbika zvikumbiro, mafomu ekubhadhara uye faira kusarudza windows.
Iyo Exit Yakazara Screen mode yakagadzirirwa kubvisa mamiriro ezvinhu umo anorwisa anogona kusundira mushandisi kuzviito zvisirizvo, achigadzirisa shanduko mune akapoterera mamiriro.
Wakawedzera rutsigiro rwekupedzisira TLS 1.3 protocol kududzirwa (RFC 8446), inosiyaniswa nekubviswa kwezvisina basa uye zvisina kuvimbika cryptographic primitives (MD5, SHA-224) uye kugona (kumanikidza, kutaurirana, asiri eAAD cipher, RSA uye DH static kiyi yekuchinjana, unix timestamp mune mameseji Hello, nezvimwewo)
Inoshanda chete pamberi pakavanzika nzira (kukanganisa imwe yemakiyi munguva yakareba haibvumidze kudonhedzwa kwechikamu chakabatwa), inopa mashandiro ari nani, inotsigira 0-RTT modhi (inobvisa kunonoka pakatangazve) anovlennyh HTTPS kubatana), ChaCha20 cipher rwizi inotsigira, Poly1305 meseji yekusimbisa algorithm (MAC), Ed25519 dhijitari siginicha-yakavakirwa yekusimbisa makiyi, HKDF (HMAC-yakavakirwa kuburitsa uye yekuwedzera kiyi dhizaini basa), algorithm-based makiyi x25519 (RFC 7748) uye x448 (RFC 8031);
Iyo Array.prototype.sort nzira yakasimbiswa.
Maitiro ekuwana Google Chrome 70?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Iyo itsva vhezheni yeChannel 70 inosvika neshanduko nyowani
Miguel hapana akakubvunza
Francisco Jose Martinez akadaro
Pindura kuna Francisco José Martínez